नितेशलाई सँगीत सिक्न हङकङबाट आर्थिक सहयोग (भिडियोसहित) » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नितेशलाई सँगीत सिक्न हङकङबाट आर्थिक सहयोग (भिडियोसहित)
शनिबार, जेष्ठ १२, २०७५ १४:४८ मा प्रकाशित !
अशोक दर्जीपछि चर्चामा आएका मोरङ मिक्लाजुङका नितेश राईलाई आर्थिक सहयोग जुटेको छ । राईलाई सँगीत सिक्न मिक्लाजुङ घर भइ हाल हङकङमा बस्दै आएका ललित कुमार चेम्जोङले २० हजार सहयोग गरेका हुन् ।
उक्त रकम उनका बुबा पुण्यप्रसाद चेम्जोङले समाजसेवी पूर्ण वाईवा, पत्रकार किसोर श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितीमा हस्तान्तरण गरेका थिए । पहिलोपल्ट युवा मन नेपाल युटुव च्यानलले लिएको नितेशको अन्तार्वाताबाट प्रभावित भएर सहयोग गरेको चेम्जोङले बताए । लुकेको प्रतिभालाई आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको पनि उनले बताए ।
नवप्रतिभा नितेशलाई यसअघि पनि हङकङबाट २० हजार आर्थिक सहयोग जुटेको थियो । अशोकपछि नितेशलाई चर्चाका ल्याउन समाजसेवी पूर्ण वाईवा पत्रकारहरु किसोर श्रेष्ठ, विवेक हिङमाङ, खड्ग वेदना र महेन्द्र थेगित सक्रिय छन् । नितेशका लागी केही दिनभित्र नै गीत रेर्कडिङको कार्य भइरहेको समाजसेवी पूर्ण वाईवाले बताएका छन्
मिक्लाजुङ २ साखरे घर भएका नितेश राईको सफल गायक बन्ने लक्ष्य रहेको छ । १५ वर्षिय उनी स्थानीय विद्यालयमा १० कक्षामा पढ्दैछन् । आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेका राईको स्वरमा भने जादु रहेको छ ।
चर्चित गायकहरुको जस्तोसुकै गीतहरु नी सहजै गाउनसक्नु उनको खुबी हो । अरुण थापाको आँखाको निन्द चोरी लाने, शिव परियारको पिउदिन भन्दाभन्दै पिलायो साथीले, हेमन्त राणाको सुन साईली जस्ता गीतहरु मिठासपुर्ण गाउँने गर्छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: विश्वका फुटबलप्रेमीले कुरेको एउटा खेल : च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा आज लिभरपुल र रियल भिड्दैं
NEXT POST Next post: ट्रम-किम शिखर वार्ता सम्भव !
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, जेष्ठ १२, २०७५ १४:४८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, जेष्ठ १२, २०७५ १४:४८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, जेष्ठ १२, २०७५ १४:४८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, जेष्ठ १२, २०७५ १४:४८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, जेष्ठ १२, २०७५ १४:४८